Buyela ku-MacOS High Sierra kusuka ku-MacOS Mojave | Ngivela kwa-mac
Buyela emuva kwi-MacOS High Sierra kusuka ku-MacOS Mojave
UJavier Porcar | | i-MacOS High Sierra
Lapho sizohlangana nenyanga yenguqulo yokugcina ye-MacOS Mojave, sithola abasebenzisi abahlola ukuthi kungenzeka yini buyela enguqulweni edlule wohlelo, isibonelo, IMacOS High Sierra.
Izizathu zalokhu kuguqulwa zingaba ziningi. Imvamisa kuhlobene nezinkinga ngenguqulo yamanje ye- isicelo oyisebenzisa njalo, noma kwezinye inkinga nganoma yikuphi ukuxhumeka uhlobo lwehadiwe. Izinsimbi ezingakashintshelwa kunguqulo yakamuva ye-macOS yamanje noma ngaphandle kwesizathu, buyela enguqulweni yaseHigh Sierra njengoba inguhlobo oluzinzile ngokwengeziwe.
Ukubuyela kunguqulo yangaphambilini ye-MacOS High Sierra akunzima, kepha kudinga izinyathelo nesikhathi sokulanda isoftware nokuyifaka. Ngalokhu kufanele sifeze izinyathelo ezahlukahlukene.
Okokuqala, thepha landa isoftware ye-MacOS High Sierra. Kufanele siye ku-Mac App Store. Uma usesha iMacOS High Sierra kusuka eMojave, ngeke ivele. Lokhu kungenxa yokuthi i-Apple ayihlinzeki ngohlelo olusebenzayo oludala kunalolu olufakiwe manje. Kepha kuyatholakala, uma siya ekuthengeni kwethu, ngaphakathi kweMac App Store. Chofoza ukulanda, ngakwesokudla.
Lokhu kulanda kuzohlala kufayela le- Izicelo zefolda ze-Mac yethu. Ukuhlonza ifayili kulula kakhulu, igama lalo Faka i-MacOS High Sierra.Naleli fayela, ungalisebenzisela: dala isifaki MacOS High Sierra boot, faka ifayela kufayela le- isicelo se-virtualization kusuka kuzinhlelo zokusebenza ezifana nokufana.
Njengoba kungelona ifayela elisebenzisekayo, asikwazi ukulifaka nje. Kulokhu, singathembela ku- inguqulo yangaphambilini yesipele seTime Machine, esiyenze neHigh Sierra ifakiwe. Inketho yokugcina ukusindisa ifayela esililandile kudiski yangaphandle bese senza ifayela le- ukufakwa okuhlanzekile. Le nketho inconywa esimweni sokuthatha isikhathi eside ungakwenzi, okungukuthi, inguqulo ngemuva kwenguqulo, noma sifaka futhi sikhiphe izinhlelo eziningi. Kufanele wazi ukuthi ukufakwa okuhlanzekile kususa konke okuqukethwe yimishini yethu, ukhetha ukuthi iyiphi inketho elungele izintshisekelo zakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » I-Mac OS X » i-MacOS High Sierra » Buyela emuva kwi-MacOS High Sierra kusuka ku-MacOS Mojave
I-High Sierra noma olunye uhlelo lokusebenza lwangaphambilini aluveli esigabeni sokuthenga esitolo se-mac.
Ngibe isimanga esingemnandi, ngemuva kokuzama nokubona ukuthi iMojave inezinambuzane eziningi ezinezinhlelo zokusebenza zemultimedia, nginqume ukwehla ngaya eHigh Sierra ebikade yenza izimanga, manje angikwazi ukulanda isithombe ukwenza ukufakwa okuhlanzekile. Ilanda kuphela i-22 Mb ephathekayo ezokwenza ukulanda emuva bese ifaka kwiMojave, futhi akuyona into engiyifunayo. I-Apple iya ngokuya isebenzisa izinqubomgomo ezifana kakhulu "nezombusazwe zombuso" ishiya eceleni abasebenzisi abakhokha umholo wabo ...
UPedro Rodriguez kusho
Gwema ukuthenga i-IMAC RETINA 21,5 inch 4K 2017, kuhamba kancane kepha okubi kakhulu ukuthi akunakwenzeka ukwenza ikhophi yokusekelayo amafayela awuhlobo lwe-APFS, kwi-hard drive yangaphandle noma ngabe iyini ngisho ne-Mac Capsule, Ngine-Mac endala ene-High Sierra efakiwe futhi isebenza njengentelezi uma iqhathaniswa neMojave, impela uma uzama ukukhuphukela eCatalina futhi ungaboni okwenzayo, ngiyaxolisa ukwenza lokhu kuthenga
Phendula ku-pedro rodriguez
Ngokusho kukaJony Ive, i-Apple Watch akuyona iwashi
Uyazi ngempela ukuthi yini ongayixhuma kwi-Mac C ye-Mac?